दशकाैंदेखि चर्चित गीत दिंदै आएकी गायिका बिष्णु माझी किन गुमनाम ? वास्तविकता के हो ? - तितोपाटी
दशकाैंदेखि चर्चित गीत दिंदै आएकी गायिका बिष्णु माझी किन गुमनाम ? वास्तविकता के हो ?
तितोपाटी – बागबजारको मूल बाटोबाट छुट्टिने कुनै गल्लीमा एउटा रेकर्डिङ स्टुडियो छ । बिहान ११ बजेतिरको समय, ब्यस्त ठाउँ अनि चहल–पहल पनि उत्तिकै छ । त्यही भीडभाडका बीच एउटा रेकर्डिङ स्टुडियो सुनसानजस्तै छ । स्टुडियोका सञ्चालक त्यहाँ छिर्न खोज्ने एकाध मानिसलाई भन्दैछन्, ‘स्टुडियो एक बजेपछि मात्र खुल्छ, त्यतिबेलै आउनुस् है ! अहिले काम गर्न सकिँदैन ।’
विष्णु माझीसम्बन्धी रहस्यलाई लिएर गायक तथा संगीतकार बादल घिमिरे पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालासमक्ष सम्म पुगेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री समक्ष विष्णुका सबै कुरा सुनाए । घिमिरेका कुरा सुनेपछि कोइरालाले विष्णु माझीका बारेमा सत्यतथ्य कुरा बाहिर ल्याउन पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए । त्यही बेला २०७२ मा भूकम्प गयो जसले गर्दा यो कुरा बीचमै रोकिएको घिमिरेको दाबी छ ।
हामीले केही समयअघि विष्णु माझीका गीत रेकर्ड भैरहने स्टुडियोका सञ्चालकहरूसँग कुराकानी गर्न खोज्यौं तर उनीहरूले विष्णु माझीका सम्बन्धमा केही बोल्न मानेनन् । बागबजार नजिकैको एक स्टुडियो सञ्चालक भन्छन्, ‘विष्णु माझी अरू कलाकारजस्तो हुनुहुन्न, उहाँका बारेमा आवश्यकभन्दा बढी बोल्यौं भने भोलि देखि नै उहाँ हाम्रो स्टुडियो आउनुहुन्न ।’ एक अर्का स्टुडियो सञ्चालक हात जोड्दै भन्छन्, ‘विष्णु माझीअनुसार चल्न सकिएन भने उहाँको गीत रेकर्ड गराउन पाइँदैन, उहाँका बारेमा हामीले केही भन्यौं भने पछि उहाँले हाम्रो स्टुडियोमा गीत रेकर्ड गराउनुहुनेछैन । त्यसैले यस विषयमा तपाईंले जे सक्नुहुन्छ आफैं खोज्नुस् है !’ विष्णु माझीका गीत निरन्तर रेकर्ड गराउने उनी मात्र होइन, यी गायिकासँग नजिक रहेका कसैले पनि उनका बारेमा केही बताउन चाहँदैनन् ।
प्रहरीको चासो पछि स्याङ्जा प्रहरीमा हाजिर
तर गत आइतबार अहिलेकी चर्चित लोक तथा दोहोरी गायिका विष्णु माझी र उनकै श्रीमान् सुन्दरमणि अधिकारी करिब ११ बजे स्याङ्जा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भए । कान्तिपुरले माझी गुमनाम रहेको समाचार प्रकाशित गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरि निरौलाको निर्देशनपछि एसपी राजकुमार लम्सालको सक्रियतामा माझी दम्पती जिल्ला प्रहरी आइपुगेका हुन्।
विष्णु र सुन्दरमणि आएसँगै विष्णुकी बहिनी जीवन, दाजु बाबुराम, बाबु ताराबहादुर र आमा धर्मकुमारी पनि सँगै आइन्। एसपी लम्सालले सुन्दरमणिको फोन नम्बर खोजेर सम्पर्क गरेपछि उनीहरू प्रहरी कार्यालय आएका थिए।‘सुन्दरमणिलाई बिहीबार फोन गरेको थिएँ’ एसपी लम्सालले भने, ‘विष्णुजी आउनुहुन्छ कि तपाईँले ल्याउनुहुन्छ? यदि तपाईँले नल्याए हामीले ल्याउनु पर्ने हुन्छ भनेको थिएँ। सुन्दरमणिले शुक्रबार र शनिबार व्यस्त भएकाले आइतबार आउने वचन दिएका थिए, आए।’ कान्तिपुरले समाचारमा विष्णु गुमनाम रहेको र बाबुसँग पनि ११ वर्षदेखि भेट नभएको उल्लेख गरेको थियो। कतिपय सञ्चारमाध्यमले सुन्दरमणिले बन्धक बनाएको आशङ्कासमेत गरेका थिए। विष्णु, सुन्दरमणि र विष्णुको परिवारसँग प्रजिअ निरौला, एसपी लम्साल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवराज शर्मा र राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख रोशन केसीसहितले छलफल गरेका थिए। सुन्दरमणिसँगै बसेका विष्णुले छलफलमा थोरै मात्र बोलेको र प्रश्नहरूको उत्तर सुन्दरमणिले नै दिने गरेको बताइएको छ।
त्यहाँ आउनुअघि नै मिडियासँग कुरा नगर्ने बताएकाले मिडियालाई भने छलफलमा सहभागी गराइएको थिएन। छलफलका क्रममा सुन्दरमणिले आफ्नो छुट्टै एउटा लक्ष्य भएकाले सार्वजनिक नभएको बताएका थिए। एसपी लम्सालले भने, ‘विष्णुजी त्यति खुल्नु भएन। गाउँले भाषामा नै केही थोरै जवाफ मात्र दिनुभयो। सुन्दरमणिले भने अन्तरजातीय विवाहमा छुटाउन खोजेकाले गुमनाम जस्तै हुनुपरेको बताएको बुझिएको छ ।
विदेश यात्रामा किन नगएको भन्ने प्रश्नमा सुन्दरमणिले विष्णुलाई मात्र विदेश यात्राको अफर आउने र आफूलाई पनि लैजाऊ भन्दा नलग्ने भएकाले नगएको बताएका थिए। ‘कतिपयले त विष्णुलाई मात्र अमेरिका लैजान्छु भने, मैले विष्णुसँग म पनि जान खोजेँ। लैजाने भए दुवै जनालाई लैजाऊ भने तर, मलाई कसैले लैजान खोजेनन्। उनी सामान्य लेखपढ गरेकी केटी हुन्। बोल्न जान्दिनन्। लेख्न, पढ्न पनि जान्दिनन्। बाहिर फेस गर्न नसक्ने भएकाले म सँगै जान खोजेको थिएँ र एक्लै पठाइनँ’ सुन्दरमणिको भनाइ उद्धृत गर्दै एसपी लम्सालले भने।
सुन्दरमणिसँग बिहेपछि गुमनाम जस्तै रहेकी विष्णुको ११ वर्षपछि बाबुसँग भेट भएको छ। बाबु ५८ वर्षीय ताराबहादुरले छोरी विष्णुसँग भेट नभएको ११ वर्ष भएको बताए । ताराबहादुरले सानै उमेरमा छोरी काठमाडौँ गएपछि घर नआउने र आफू पनि काठमाडौँ जान नसक्ने हुँदा भेट नभएको बताएका थिए। आइतबार ताराबहादुरको छोरी भेट्ने सपना पनि पूरा भएको छ। प्रहरीले विष्णुको खोजी गरेर सम्पर्कमा आएपछि माइती पक्षलाई पनि बोलाएको हो। प्रहरीको बिचमा छोरी भेटेका ताराबहादुर भने केही बोल्न सकेनन्। छुट्टै कुरा गर्न पनि पाएनन्। विष्णु सुन्दरमणिसँग आउने र जाने गरिन्। आमा धर्मकुमारीले भने काठमाडौँ नै गएर छोरी भेट्ने गरेको बताएकी थिइन्।
January 10, 2019 2:05 pm | फिचर न्युज, विचित्र संसार, संगीत